Brazil ndiyo nyika inodhura kwazvo kutenga iPhone, United States yakachipa kwazvo | IPhone nhau
Nguva yega yega Apple painovhura chishandiso chitsva, kunyanya sezvakaitika mumakore achangodarika uko ivo vari kuramba vachidhura, vazhinji ndivo vaongorori nevashandisi vano ivo vanotanga kuita kuverenga pamusoro pekuti chii chichava mutengo wemidziyo mitsva munyika yavo. Semutemo wenguva dzose, mutengo wechigadzirwa haungove chete zvichienderana nekutsinhana kwemari panguva iyoyo, asi zvakare kunoenderana neVAT yenyika yega yega, iyo muEurope semuenzaniso, yakasiyana munyika zhinji, saka muFrance neGerman, nyika uko mhando nyowani dzinowanzo svika pakutanga, ipa dzakasiyana mitengo yemhando imwe chete.
Deutsche Bank yaita chidzidzo icho icho chinoratidza mutengo weiyo iPhone 6 mune yayo yakachipa vhezheni, ndiko kuti, iyo inopa iyo diki diki yekuchengetera huwandu, 16 GB. Chirevo ichi chakagadzirwa naJim Reid, mumwe wevanoongorora vekambani. Reid yakagadzira kurongeka matinogona kuona mutengo weiyo iPhone 6 mune 16 GB modhi munyika makumi maviri nenomwe. Kurongwa uku kwakarongeka kubva munyika uko kuri kudhura kutenga iPhone Brazil, nemutengo wemadhora mazana mapfumbamwe nemapfumbamwe, kuenda kunzvimbo isingadhuri kuiwana, United States nemutengo wemadhora mazana manomwe nemasere.
Dambudziko remutengo wemidziyo Apple muBrazil inokurudzirwa nemitero yepamusoro yetsika kuti nyika inosungirwa kubhadhara ese makambani anopinza michina kubva kunze kwenyika. Kuedza kugadzirisa mutengo wakakwira wemidziyo, Apple yakasangana kakawanda neFoxconn yekambani yeChinese yekudzidza mukana wekugadzira michina yayo munyika. Brazil ndeimwe nyika ine mikana yekutengesa inoshamisa, asi mitengo yakakwira nekuda kwemitero yemitero zvaireva kuti kambani yatonga kunze kwekutarisa nyika iyoyo kwenguva iripo.
Pakati penyika dzinodhura kutenga iPhone yatinowana kunze kweBarsil, Indonesia, Sweden, India, Italy neDenmark. Idzo nyika uko zvakachipa kutenga iyo iPhone kuwedzera kuUnited States, kune Hong Kong, Japan, South Africa, Singapore, Switzerland neUnited Kingdom.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Brazil ndiyo nyika inodhura kwazvo kutenga iPhone, United States yakachipa kwazvo
Matias Fernandez akadaro
KuUruguay, kutenga iPhone uine garandi uye tikiti inodhura kusvika US $ 1700, ndiani akaita iro runyorwa?
Imwe inotengeswa kunze kwetikiti, kwakatenderedza U $ S 1000
Pindura kuna Matías Fernández
Pano muParaguay (South America) uye nyika yakavakidzana neBrazil, zvitoro zviviri chete zvinounza Apple ndiTigo naClaro (Under contract) Ivo vanopa iyo iPhone 6 pamutengo we $ 498 ye16GB, kana iwe ukatenga kubva kune wechitatu bato chengetedza ipapo kana ichiita kunge inokwira kutenderedza $ 550. Saizvozvowo, vanhu vanosarudza kuitenga kubva kuTigo, nekuti ivo vanopa nyore mari mune zvishandiso.
Apple inoisa mutengo kurudzi roga roga sezvo ichibuda mumazai ayo ... zviri nyore kudaro
Hahahaha zvinonyadzisa newe asi zvinoratidza kuti iwe wakatarisa kuColombia, iyo yakachipa iri SE inokwana 1 peso yeColombia, iyo US yakaenzana nemadhora mazana mashanu, kune rimwe divi, iyo 500.000GB iPhone 500Plus ine mutengo we6 iyo yakaenzana ne16 Madhora, unogona kufungidzira mamwe acho.
Telmo Bastidas akadaro
Ndatenda nekusasanganisira Ecuador. Dai takanga taita kudaro, taizove tiri munzvimbo dzekutanga, kwete kuzotaura zvekutanga. Zvinosuruvarisa, mitero nemitero yemitero yakaiswa nehurumende inoita kuti zvinhu zvese zvinounzwa zvisakwanisike kune vakawanda. Kune izvi zvinowedzerwa kuti kubva muna Chikumi VAT inokwira 2%.
Pindura Telmo Bastidas
Jose  (@ Josecr07) akadaro
Mitengo yaidikanwa munyika dzeLatin America nekuti apa iPhone inowedzera inenge $ 100 kana $ 200. Zvirinani kuCosta Rica ndizvo.
Pindura kuna Jose  (@ Josecr07)
pablo pardo akadaro
Nyika dzese dzeSouth America dzinodhura kwazvo, Chile inofanirwawo kuonekwa munzvimbo iyoyo.
Pindura Pablo Pardo
Iyo iPhone 4s uye iPad 2 Vacharega riini kugamuchira zvigadziriso?